Ityala loMthengi-Laizhou Dongsheng Valve Co., Ltd.
IiValve zokuHlola ezithe cwaka zathunyelwa e-Itali ukusukela ngo-2005
Umthengi yi-brand yevalve eyaziwayo e-Italiya, yintsebenziswano yethu yexesha elide kubathengi abangaphezu kweminyaka elishumi ubudala, bebesoloko bethenga ngokuqhubekayo kwaye ngokuthe ngcembe bathenga iivalvu zethu zokujonga ezithe cwaka kunye nezinye iivalvu zokutshekisha, phakathi kwazo inani le-flange ethe cwaka. iivalvu ezi-odolwe kakhulu.
Impendulo yomThengi: "Umgangatho wee-valve zakho zokutshekisha ulungile kakhulu, ngokukodwa ixesha lokuhambisa lihambelana kakhulu neemfuno zethu. Abathengi bethu banelisekile kakhulu. Ndiyaneliseka kakhulu ngenkonzo yakho kwaye ndiyathemba ukuba unokwandisa uluhlu lwemveliso yakho ukuhlangabezana nezinye zethu iimfuno zevalvu kwixesha elizayo. Enkosi."
IiValuvu zokuHlola iipleyiti ezimbini zathunyelwa eSpain ukusukela ngo-2006
Umthengi uvela eSpain, umthengisi odumileyo wendawo, sadibana nomboniso.Bangabathengi bethu bexesha elide abaye bathenga iivalve zethu zokujonga iipleyiti ezimbini.
Impendulo yomThengi: "Umgangatho weevalvu zakho zokujonga ipleyiti ephindwe kabini ubusoloko ubalaseleyo, kunye nokuqinisekiswa komgangatho ophezulu kunye namaxesha afanelekileyo okuhambisa. Enkosi"
I-Ball Check Valves yathunyelwa eNetherlands ukusuka ngo-2007 ukuza kuthi ga ngoku
Umthengi luphawu oludumileyo lwevalvu eNetherlands.Sadibana kwi-Amsterdam Fair.Bebengabathengi bethu bexesha elide ngaphezulu kweminyaka eyi-10, kwaye bebesoloko bethe gqolo kwaye ngokuthe ngcembe bethenga iivalvu zethu zokujonga iibhola kunye nezinye iivalvu zokukhangela.
Kwiminyaka yokuqala, kwakukho imveliso encinci yasekhaya yeevalve zokujonga ibhola.Umzi-mveliso wethu wazivelisa kwangethuba.
Impendulo yomthengi: "I-valve yakho yokukhangela ibhola ilungile kakhulu, isiqinisekiso somgangatho omhle, ixesha lokuhambisa likwangaphakathi koluhlu lwethu olufanelekileyo. Sijonge phambili kwintsebenziswano kunye nophuhliso kwixesha elizayo."
Iivalvu ze-diaphragm zithunyelwe e-Afrika ukusuka ngo-2008 ukuza kuthi ga ngoku
Umthengi uvela e-Afrika kwaye unoxanduva lweprojekthi yemigodi.Bangabathengi bethu abaqhelekileyo abaye basebenzisana nathi ngaphezu kweminyaka elishumi.Bezithe gqolo kwaye ngokuthe ngcembe zithenga iivalvu zethu ze-diaphragm.
Impendulo yabathengi: "Iivalvu zakho ze-diaphragm bezisoloko zisemgangathweni kwaye zifanelekile ngokupheleleyo kwimisebenzi yethu yezimayini. Ndivuya kakhulu ngenkonzo yakho. Sithemba ukuqhubeka nentsebenziswano yethu emihle kwixesha elizayo."
Iivalvu zeButterfly zathunyelwa kwiiPhilippines ngoJulayi ka-2020
Umxhasi wayevela kwiiPhilippines kwaye wayesandula ukuqala ukuthengisa.Uza kuthenga ibhetshi encinci yeevalvu zebhabhathane kwaye azibeke kwimarike yophuhliso lwemarike.Ngokwexabiso, sinike abathengi bethu inkxaso eninzi kwaye unombulelo kakhulu kuthi.
"Iivalve zebhabhathane zikwimeko entle kwaye umgangatho ulungile. Enkosi. Ndisazisa kwimarike. Njengoko zininzi iivalvu ezingabizi kakhulu. Kodwa zilumke. Iivalve zakho zingcono kunezazo. Lindela iiodolo ezinkulu ngelixa elizayo."
Iivalvu zesango zathunyelwa eMalaysia ngoMeyi ka-2017
Umthengi ngumthengisi wendawo ovela eMalaysia, kwaye kukho iinkampani ezimbini ezisebenzayo.Ngo-2017, bathatha iprojekthi yobunjineli be-valve yesango.Umthengi uphendle iLaizhou Dongsheng Valve Co., LTD kwiwebhusayithi.Ngenxa yobuninzi kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuchazwa, uthethathethwano lwaqhubeka ixesha elide, kodwa ekugqibeleni safikelela kwintsebenziswano elungileyo kunye nomthengi ngenxa yobungcali kunye nomgangatho ophezulu.
"Iivalvu zesango le-DSV zisemgangathweni olungileyo, ishishini lobuchwephesha kunye nexesha lokuhambisa elihambelanayo. Inkonzo emva kokuthengisa ikwanelisa kakhulu kuthi kunye nabathengi bethu. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nezinye iiprojekthi zevalve yesango kwixesha elizayo."